तितली टैटू डिजाइन आइडिया को लागि पुरुष र महिलाहरु - टैटू कला विचार
sonitattoo जुलाई 1, 2016
तितली टैटूहरूको सुन्दरता अझ बढी जोडिएको हुन सक्दैन। तितलीहरू सबैलाई माया गर्छ जसले प्रकृतिलाई सराहना गर्दछ। महिलाहरु प्रायः हामी देख्छौँ, जसले तिनीहरूको शरीरमा तितलीहरू टाटुको रूपमा लिन्छन्। तितलीहरूको आकार र रंगहरू के ती कला कामका लागि एकदम सही बनाउँछ। शरीरको शायद नै एक भाग हो कि तितली राम्रो तरिकाले प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन।
तपाईं जीवनमा कठिनाइहरू वा चुनौतीहरूको माध्यमबाट जानुभएको छ र तिनीहरूलाई समातेको छ? टटूको रूपमा तितलीहरूको प्रयोगले तपाईंलाई सम्झन मद्दत गर्दछ।
आध्यात्मिकता र प्रेमबारे तितली वार्ता यसले मनोविज्ञान र प्रेम, इच्छा र स्नेह पनि चित्रण गर्न सक्छ। #Butterfly धेरै सुन्दर र रंगीन हो जुन कारण सबै महिलाहरु लाई उनीहरूको शरीरमा स्याङ्किङ्ग चाहन्छन्। सुन्दरता र गौरवले यो स्याउको छ जब यो स्याही छ अद्भुत छ। यो एक पहनने को काम को फैसला गर्न को लागि #tattoo कहाँ राखयो।
1. टखने फूल र तितली केटीहरुको लागि प्यारा टैटू डिजाइन
सबै भन्दा प्रेरणादायक कथाहरु तितलीहरु को चित्रण संग भनिएको छ। महिलाहरु लाई स्तन क्यान्सर बचेको आज देखी देखिएका छन्, प्रभावित क्षेत्रहरुमा घोडाहरु को कवर गर्न तितलियों को उपयोग गर्दछ। छवि स्रोत
2। पिरामिड र तितली टाउको दुखाइ
तपाईंको तितलीको आकार तपाईले आफ्नो शरीरमा छोड्न चाहानुहुन्छ निर्भर गर्दछ। यद्यपि, यदि तपाईं ठूलो कुरा सोच्दै हुनुहुन्छ भने, जांघ, पेट वा पछाडि सही स्थान हुन सक्छ। छवि स्रोत
3। पछाडीमा महिलाहरुको लागि हरित तितली टटू डिजाइन
कलाकारले तपाईलाई निर्णय गर्नका लागि आफैले सही तितली टटू चयन गर्ने प्रक्रियाको साथ साथमा सहयोग गर्न मद्दत गर्नेछ। छवि स्रोत
4। महिलाहरु को लागि प्यारा तितली टैटू डिजाइन स्याही विचार
घोडाहरू, बदसूरत अनुभवहरू र पीडा तितलीहरू जुन सुन्दर प्राणीहरूको रूपमा चिनिन्छन्। के तपाई महिला हुनुहुन्छ जो तपाईंको महिलावादी पक्ष देखाउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ? छवि स्रोत
5। महिलाहरूको लागि सरल पछाडि तितली टटू डिजाइन
यदि तपाईं बटरफ्लाइलाई माया गर्नुहुन्छ भने एक जना पुरुष हुनुहुन्छ, तपाई प्राकृतिक तितलियों संग आउँछ कि सुन्दर छोडेर तिनीहरूलाई तिनीहरूलाई सानो मूर्ति बनाउन सक्नुहुन्छ। छवि स्रोत
6। प्यारा तितली टैटू डिजाइन स्याही विचार
तितली टटूको लागि जानुहोस्। तपाईं एक व्यक्ति हुन सक्छ जसले प्रकृतिलाई प्रेम गर्छ र छुटाउनको लागि निशानहरू हो; तितलियों तपाईं को लागि सबै भन्दा राम्रो विकल्प हुन सक्छ। छवि स्रोत
7. कम्पास र फिर्ता मा केटीहरुको लागि तितली टैटू स्याही
तपाईंले फूलहरू वरिपरि तिनीहरूलाई कुनै अन्य वस्तुको बारेमा सिर्जना गरी तपाईंको रुचिको तर्फबाट आफ्नो तितली टैटूहरूमा मज्जा थप्न सक्नुहुनेछ। छवि स्रोत
8. संगीत त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईन्छ। विश्वास गर्नुहोस्
दिनको अन्त्यमा, तपाईं खुसी हुनुहुन्छ कि तपाईंले यी सुन्दर प्राणीहरू तपाईंको शरीरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईं धेरै तितलीहरु को आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ जसलाई तपाईं मा लिखित प्यारा शब्दहरु संग पनि चाहानुहुन्छ। छवि स्रोत
9। फैशनी प्रेमी मान्छे को लागि अद्भुत तितली टैटू विचार
मक्खनका पखेटाहरू रंगीन र नाजुक हुन्छन्। यी पखेटाहरूले आर्द्रता र दुष्टाचार व्यक्त गर्न जान्दछन्। अझै पनि चुनौतीहरू जित्न बल देखाउँदछ। छवि स्रोत
10। फूल र तितली टटू डिजाइन स्याही विचार
त्यहाँ विभिन्न प्रकारका तितलीहरू छन् जुन तपाईं यस स्टाइलिश ट्याटटोको लागि तयार हुनुहुन्छ भने छनौट गर्न चाहानुहुन्छ। छवि स्रोत
11। सानो पेट तितली महिलाहरु को लागि टैटू विचार
तितली टैटू यति सुन्दर छ कि तपाईं आफ्नो शरीरको केहि संवेदनशील भागहरूमा ध्यान दिन सक्नुहुन्छ। छवि स्रोत
12। पीठमा नीलो रंगको तितली टट्याट मसी विचार
यस प्यारा टैटूको साथ प्रकृतिको तत्वहरूसँग जोड्नुहोस्। तपाईं शरीर को कुनै पनि भाग मा टैटू छोड सकते हो र कला अझै अद्भुत हुनेछ। छवि स्रोत
थप तितली टटू डिजाइनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
टैटू विचारहरूआँखा टटूसंगीत टैटूहरूप्यारा टैटूहरूटखने टैटूकमल फूल टटूईगल ट्याटोप्यार टैटूट्याटुहरू केटीहरूको लागिगुलाब टैटूहरूसिंह टटटोहरूचन्द्र टोटोटोसूर्य टैटूहरूसबैभन्दा राम्रो साथी टैटूहरूmehndi डिजाइनतीर टटूहात्ती टटूहात टाटाटोसkoi fish tattooओटोपस ट्याटूफिर्ता ट्याटोहरूयुगल टैटूहरूहेनना टैटूwatercolor टटूफूल टैटूहरूछाती टैटूहरूरिप टैटूअनन्तता टटूFeather Tattooहीरे टैटूआदिवासी टैटूहरूदूत टैटूपैट टैटूपुरुषहरूको लागि टैटूबिल्ली ट्याटोबहिनी टैटूहरूहृदय टटटोगर्दन टैटूहरूबिस्कुट टटूपक्षी टैटूहरूज्यामितीय ट्याटुहरूहात ट्याटोसआस्तीन टैटूहरूतितली टैटूहरूचेरी खिलौना टैटूक्राउन टैटूहरूक्रस टैटूकम्पास टैटूएंकर टैटूहरूराशिफल चिन्ह ट्याटोहरू